1. Ahoana ny fomba hampihena ny lanjan'ny tarehy Zava-dehibe ny manampy ny tarehintsika ho mahia sy bika, ary koa varavarana mankamin'ny fo izay milaza amin'ny olona manodidina anao fa mikarakara anao manokana ianao. Betsaka ny olona manandrana mitady fomba hampihenana ny lanjan'ny tarehy izay mandeha. Fa mandra-pahatongan'izany!?! Ny tarehy mivonto, tarehy boribory, takolaka be volo, wattle hatoka dia hijanona ao amintsika mandritra ny fotoana maharitra. Mandra-pahatonga ny ahiahy ho an'ny vehivavy Izay te handany lanja kely ny tarehy Androany kosa dia afaka milaza izany aminao aho Ianao irery ihany no mahalala ny fomba mampihena ny tarehy (ny fomba mampihena ny tarehy) izay entintsika anio. Ho mahia ny tavanao Mandra-pahitanao ny tenanao
2. Ahenao ny fihinanana gliosida tsotra toy ny vary fotsy, ny siramamy voadio, ny tsakitsaky, ny gilasy sns, ary koa ny sakafo voahodina. Izay hisy taha-sodium betsaka Miteraka edema amin'ny vatana sy tarehy Na iza no hahavery ny lanjan'ny tarehy amin'ny fihinanana karbaona ambany (Low-Carbs Diet) dia ny famerana ny sakafo misy karbaona be. Ary mitodiha any amin'ny sakafo ambany karbika mandritra ny 14 andro misesy fotsiny, dia ho hitantsika mazava kokoa ny valin'ny fihenan'ny lanjan'ny tarehy.
3. Ampiharo ny faritra rehetra amin'ny vatana Ny fitsipiky ny ankihibe amin'ny fahaverezan'ny lanjan'ny tarehy dia ny famoahana tavy be loatra amin'ny tavanao. Izay ahafahantsika mampihena ny lanjan'ny tarehy amin'ny alàlan'ny hetsika izay misarika angovo avy amin'ny tavy be loatra Miaraka amin'ny fampiharana tsy tapaka 15 minitra mandroso Amin'ny tahan'ny fitempon'ny fatu 130-150 isa-minitra, izay hanampy handoro ny tavy sy ny takolaka be loatra amin'ny fomba mahomby kokoa. Rehefa vita mandritra ny 30 andro misesy miaraka amin'ny fihinanana gliosida tsotra. Hanampy antsika hihena amin'ny lanjany izany.
4. Yoga ho an'ny tavy mandoro ny tavy Fomba tena mora very lanja tarehy. Ny vava, dick, takolaka ary molotra fotsiny no ataontsika. Atodiho hiverina ny lohanao. Amin'ny famelarana ny vozona sy ny saokany, ny fijerena ny valindrihana amin'ny fanaovana 10 minitra, in-15 isan'andro, maraina ary alohan'ny hatory mandritra ny 30 andro tsy tapaka, dia hanampy hampihena ny lanjan'ny tarehy.
5. Fanamafisana mafy Ity fomba ity mba hampihenana ny lanjan'ny tarehy. Mampiasa teknika fanorana tarehy fotsiny izahay miaraka amin'ny maraina fanosotra sy ny fotoana fatoriana. Apetaho fotsiny ny crème 5 teboka manan-danja amin'ny tarehy dia ny handrina, ny takolaka, ny orona, ny saokanao ary avy eo ampiasao ny ankihiben-tànana roa amin'ny saokany. Tondroy ary apetraho amin'ny lafiny roa ny tempoly. Avy eo ampiasao miandalana ny ankihiben-tànanao Mametaho azy ho endrika V. Avy eo, rehefa tonga teo amin'ny takolany, dia nanotra bebe kokoa hatrany amin'ny handriny. Avy eo ampiasao miandalana ny ankihiben-tànanao Manotra hatramin'ny volon-doha. Ity fomba ity dia teknika mitaky antsika hanafana ny takolaka. Mba hanamafisana ny hozatry ny takolaka sy hampihena ny lanjan'ny tarehy.
6. Ahoana ny fomba hampihena ny lanjan'ny tarehy, entintsika anio. Tsy sarotra izany, sa tsy izany? Izay manana fomba hafa lehibe, aza hadino ny mibitsibitsika hifampiresaka ihany koa. Hmph !! Satria hihena ny lanjan'ny tarehy miaraka amintsika ^^ hehe ^^